မူလစာမျက်နှာနှင့်မိသားစု | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အဘယ်အရာကိုဖေဖော်ဝါရီလ 23 အပေါ်လူကိုပေးစေခြင်းငှါ,
အပေါ် Posted 14.02.2019 14.02.2019
ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းသားနေ့နောက်ခံလူ imperceptibly တစ်အမျိုးသားများရဲ့နေ့သို့လှည့်။ ကျနော်တို့မခွဲခြားဘဲသူတို့ကစစ်တပ်တွင်အစေခံရန်ဖြစ်ပျက်ရှိမရှိ၏, လူတို့အားကောင်းတဲ့လက်ဆောင်တွေတင်ပြ 23 ဖေဖော်ဝါရီလသုံးပါ။ ထိုအ ...
ဖော်ပြချက်ထူ ထပ်. ကြက်တူရွေးနှင့်အခြား
လူအတော်များများဟာနေအိမ်ကွဲပြားခြားနားသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှာစောင့်ရှောက်လော့။ မကြာခဏ budgerigar တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကလေးများအဘို့ဖော်ပြချက်အမြင်အာရုံငှက်၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုရှင်းပြဖို့ရုပ်ပုံများနှင့်အတူအသေးစိတ်တင်ပြသွားပါသည်။ အိမ်မှာစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ၎င်းထိုသို့သိရန်အရေးကြီးသည် ...
ကော်ပိုရိတ်ပါတီတခုခုမှာပြုလုပ်တဲ့သဘောင်္တစ်ခု - မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားနဲ့အများကြီးပြောတာ
ကော်ပိုရိတ်မှာကင်ကဘာလဲ? သူ့ကိုယ်ပိုင်စကားနဲ့သူတခါတရံအမှန်တကယ်ပြပွဲသို့လှည့်ကပြောသည်။ ဒါဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်ရပါမည်။ သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များတို့တွင်အပရိသတ်ကိုမှာမိုက်ခရိုဖုန်းသို့အနည်းငယ်သောစကားကိုပြောနိုင်စွမ်း - ကဖွင့် ...
ကိုယ်ဝန်အတွက် Bacteriuria: လက္ခဏာတွေ, ကုသ
ကနျြးမာရေးကသူ့ပြည်နယ်မှအထူးသဖြင့်ကြင်နာကိုယ်ဝန်မျှော်မိခင်စဉ်အတွင်း။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အမျိုးမျိုးသောရောဂါဗေဒနှင့်ရောဂါများမှမျှတတဲ့လိင်ဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရကြသည် ...
တစ်ဦးခွေးရတဲ့ကြိုတင်မဲအတွက်အမည်များကိုအတူတက်လာမယ့်, အပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ကြိုးစားနေခြင်းမပြုမီကလူအများစုဟာ။ ထိုအစဉ်ကိုလူတိုင်းမူရင်းနှင့်အမှတ်ရစရာအမည်ပြောင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လိုသည်။ ခွေးအဘို့ရယ်စရာ name ကို - ကဖွင့် ...
ဘောလုံးနှင့်အတူအပူပိုင်းရေကူးကန်: ဖော်ပြချက်များနှင့်အားသာချက်များ။ ဘောလုံးနဲ့ခြောက်သွေ့တဲ့ရေကူးကန်အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကိုယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်သားသမီးတို့အဘို့ပျော်စရာမရှိပါ။ ဤဆောင်းပါး၌သငျသညျဘောလုံးနဲ့အတူခြောက်သွေ့တဲ့ရေကန်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ သင်ကအပြစ်တွေဂိမ်းစင်တာရှိဘာသငျယူပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်လည်းထွက်ရှာတွေ့ ...
လေး၏အသက်အရွယ်မတက်ရောက်သူငယ်တန်းကလေးများ၏အလယျပိုငျးအုပ်စုသည်။ ဤရွေ့ကားကျောင်းသားများကိုတ္ထုများအကြားတည်ရှိနေသောဆက်ဆံရေးကိုနားလည်ပါသည်။ သူတို့လူကြီးများ၏လုပ်ရပ်များဖော်ကျူးဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများ။ သငျသညျဖို့ကြိုးစားနေမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကလေးများအပေါ်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့ရပါလျှင် ...
Felix (ကြောင်အစာ): ဖောက်သည်နှင့်တိရိစ္ဆာန်ဆရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
furry အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏အတော်များများကပိုင်ရှင်တွေကသူတို့ကြောင်, ကြောင်များနှင့်ပေါက်အဆင်သင့် forage အစာကျွေးဖို့နှစ်သက်။ ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများနှင့်သူတို့ထဲကတဦးတည်းအနေဖြင့်ရုရှားစျေးကွက်အပေါ်ယနေ့အများအပြားထုတ်ကုန် - ကြောင်တစ်ကောင် ...
ညှပ်ခွေး: ရွေးချယ်ရာတွင်ဝယ်ယူဖြတ်တောက်, ကြိတ်, စျေးနှုန်းများနှင့်ပိုင်ရှင်များ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မှစ. တန်ဖိုးနည်းစက်မှုနှင့်လက်စွဲစာအုပ်ညှပ်ခွေး
သငျသညျစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ကြောင်းထားတဲ့သိုးမွေးဘို့ခွေးဖောက်ရှိပါကသင်တစ်ဦးဆံပင်များအတွက်အထူးစက်လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်အလှပြင်ဆိုင်မှအထူးဧည့်သည်ဖြစ်ပြီးလျှင်ပင်ဖြစ်ပါသည် ...
ဂရိတ်ပန်ကိတ်အပတ်။ Shrovetide ၏ကျယ်ပြန့်ပွဲ
ကျယ်ပြန့်ပန်ကိတ်, Krivoshejka, crepe ထုတ်လုပ်သူ Obeduha, ပန်ကိတ်ရက်သတ္တပတ် - ဤနီးပါးလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကျင်းပခဲ့သောတဦးတည်းနှင့်အတူတူပင်အခမ်းအနားဖြစ်ပါသည်။ ဒီအားလပ်ရက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနှင့်နွေဦး၏အနားသတ်မျဉ်းသည် ...
မိဘများသည်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မွေးကင်းစအမှုန့်, မုန့်သို့မဟုတ်ထောပတ်၏ပြင်ပမအင်္ဂါသန့်ရှင်းရေးမကြာခဏရေချိုးအပါအဝင်လျော်သောသန့်ရှင်းရေး၏မေးခွန်းများကိုအတူစိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။ အစအနအသားအရေသင့်လျော်၏မရှိခြင်းအတွက်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောက ...
ကလေးများအတွက် Croup ။ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကလေးများအတွက် croup ကုသ
croup အဖြစ်လူသိများဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာအတွက်အသံအိုး၏ stenosis ၏ရလဒ်အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်ထားတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ, ။ ချောင်းဆိုးခြင်း, အသက်ရှုမဝြခင်း "ဟောင်" ဆူညံအသက်ရှူအခက်အခဲများ, အသံပြာ: ဒီရောဂါကအောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ Croup ကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် - ...
သူငယ်တန်းရှိအဖွဲ့အမည် - မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
အဆိုပါသူငယ်တန်းအတွက်အုပ်စုတစ်စု၏နာမတော်သည်ကြီးမြတ်အရေးပါမှုရှိပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးလူကြီးများနှင့် kiddies ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့အခါ, အစားသာမန် "အငယ်အုပ်စုကို" သို့မဟုတ် "အုပ်စုတစ်စု№2»ဆိုစိတ်ဝင်စားဖို့အမည်ဖြင့်အသံ။ ထိုအခါတစ်ဦးချင်းစီလည်းမရှိ။ အတူတက်လာရန် ...
အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်အမှတ်တံဆိပ်လိုအပ်သလဲ? Dogs ကိုအမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်။ ဒီဘာလုပ်နေကြသလဲ
ထိုသို့သောတိရစ္ဆာန်များ၏မှတ်ပုံတင်၏နည်းလမ်းနှင့်အရှည်လျားအစားအစာများတွင်အသုံးပြုထားသည်နှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်ပင်ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ။ နောက်ဆုံးရွှေ့ပြောင်းလေ့လာဖို့ထိုကဲ့သို့သောကိုင်တွယ်ထွက်သယ်ဆောင်။ စိုက်ပျိုးရေး, အမှတ်အသားခုနှစ်တွင် ...
ချောမွေ့ Toy တယ်ရီယာ: မွေးမြူရေးဖော်ပြချက်, စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားပေါ်ချောမွေ့ဆံပင်ကစားစရာတယ်ရီယာခွေး။ သို့သော်သူသည်ဖောက်တဲ့ Full-စုံတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တယ်ရီယာ၏သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားရှိပါတယ်, မခက်ခဲသည်ကဒီခွေးမဆံ့, ပျမ်းမျှထက်လျော့နည်းသောအရာ2ကီလိုဂရမ်အလေးချိန် ...
ဒါဟာတာရှည်ကွဲပြားခြားနားသောမျက်လုံးများနှင့်အတူကြောင်တစ်ကောင်, သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေမှကောင်းသောကံရောက်စေဖို့ယုံကြည်လျက်ရှိသည်။ နှစ်ပေါင်းသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤထူးခြားသောနှင့်တစ်ခါတစ်ရံပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးကြောက်မက်ဖွယ်မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောစေခဲ့ပါတယ်အဘယ်အရာကိုစောဒကတက်ကြသည်။ အချို့ကပြောဆိုထားသည်ကြပါပြီ ...
ငါးခူ synodontis: အမျိုးအစားများ, ဖော်ပြချက်နဲ့ content
ယင်းအစ aquarists မှာမကြာခဏပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ နုန်းများနှင့်ရှုတ်ထွေးအလွန်လျင်မြန်စွာအကြံပေးအဖွဲ့၏အောက်ဆုံး, ရေအစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါသည်, စျေးကြီးငါးနေမကောင်း get နှင့်သေဆုံးလျက်ရှိသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကွံဉာဏျမပါဘဲရှိပါတယ်မလုပျနိုငျသညျ။ ထိုအခါသူတို့ကိုတဦး ...
အီတလီထီးတပါးခွေး: ဖောက်ဖော်ပြချက် (ဓါတ်ပုံများ)
အီတလီထီးတပါးခွေး - နူးညံ့သိမ်မွေ့သဘောသဘာဝရှိပြီးကလေးများပင်မွေးကင်းစနှင့်အတူကောင်းစွာလျှောက်တွင်ရရှိသွားတဲ့တစ်ဦး, အသေးစားကြော့နှင့်ယဉ်တိရိစ္ဆာန်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရှက်, ဒါကြောင့်မမျှော်လင့်ဘဲလုပ်ရပ်များတစ် prompt ကိုတုံ့ပြန်မှုလိုက်နာပါ။ ခွေးသမင် ...
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလူတိုင်းကကျန်းမာခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေနှင့်အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ရာမှအတိအကျအတိုင်းအတာသင်၏အသက်တာအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သင့်သည်။ အချိန်သား၏အအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးအပေါ်သုံးစွဲ ...